पोल्यान्ड र युक्रेनको संयुक्त आयोजनमा युरोकप २०१२ (Eurocup 2012) सञ्चालन भइरहेको छ । पहिलो चरणको खेल सकिएर, दोस्रो चरणको खेल सुरु भइसकेकोछ, अनि युरोकप २०१२ मा झन् झन् रोमाञ्चकता थपिँदै गएकोछ । युरोकप २०१२ को गर्मी संसारभरि फैलिँदा, नेपालमा पनि चर्चा नहुने त कुरै भएन । तर नेपालमा युरोकपको चर्चा अफलाइनमा मात्र सिमित रहेको छैन । गुगल ट्रेन्डका अनुसार “Eurocup 2012” सबैभन्दा धेरै पटक नेपालबाट गुगलमा सर्च गरिएकोछ ।
नेपालमा फुटबल अत्यन्तै लोकप्रिय छ । अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाहरुमा नेपालले खासै प्रगति गर्न नसकेपनि, नेपालमा फुटबल खेल प्रेमीहरुको जमात चाँहि दिनहुँ बढ्दो छ । हामी फुटबल भनेपछि आफ्नो निन्द्रै माया मारेर, रात रात भर जागा बसेर फुटबल हेर्छौँ । फुटबल खेल हेर्न कै लागि, चोकचोकमा स्थानिय क्लब र युवाहरुले प्रोजेक्टर नै राख्ने गरेकाछन् ।
गुगल ट्रेन्डका अनुसार युरोकप सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ, नेपालबाट गुगलमा खोजि गरिएकोछ । यसले पनि नेपालमा फुटबलको ‘क्रेज’ कति छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ । साथै, यसले नेपालमा इन्टरनेटमा खोज्ने बानीको पनि विकास भइरहेको कुरा तर्फ ईङ्गित गर्छ । गुगलमा नेपालका अतिरिक्त युएई, क्यानडा, सिंगापुर, मलेसिया लगायत देशबाट “युरोकप २०१२” अत्याधिक सर्च भइरहेको छ ।
पहिलो तस्विर द हिमालयन टाइम्सबाट साभार
Aakar Anil August 1, 2012 at 11:33 AM
I agree with your view sudip kafle . However, Portal from Ireland has reported that, Nepal was seen in top, and they've different list of country. But when I checked the Google trends, I couldn't find that list, thus I make new one. :)
sudip kafle August 1, 2012 at 11:33 AM
Euro 2012 नभएर Euro Cup 2012 मा नेपाल टपमा आ'को छ, euro 2012 मा त नेपाल को नाम निसान छैन, नेपालीलाई मात्र गलत नाम भन्ने बानी परेर टप मा आ'को होला !
kshiteej chapa August 1, 2012 at 11:33 AM
यती धेरै नेपाली फुटबल प्रेमी दर्शक हरु अब बेल्जियम को झैँ लिलामी मा बस्नु सायद राम्रो हुन्छ कि ? जस्तो यहा पद्नुहोस..www.unlimitedhorizon.co.cc